Shina: Fanavaozam-pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2009 10:17 GMT
Nanomboka niady hevitra ny amin'ny drafi-panavaozana ny lalam-pifidianana, mba hampitovy lanja ny vaton'ny any an-tanandehibe ny vaton'ny any ambanivohitra ny mpanao lalàna faratampony any Shina, ny Antenimieram-Pirenena entim-Bahoaka. Voapetraka hovakiana voalohany nandritra ny fivoriana fanao isan-droavolana faha-11 teo anivon'ny vaomiera maharitra tamin'ny herinandro teo ity volavolan-dalàna ity, izay mametraka fa “mitovy araka ny isan'ny mponina isoloany tena ny isan'ny solombavam- bahoaka avy any an-tanandebibe sy ny avy any ambanivohitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho ao amin'ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka”.
Amin'ny lalàna misy ankehitriny manko, ny solombavam-bahoaka avy any ambanivohitra dia misolo olona mampitombo in'efatra noho ireo avy any an-tanan-dehibe. Ny dikan'izany dia hoe ny solombavam-bahoaka avy any ambanivohitra dia misolo tena olona 960 000, raha misolo tena olona 240 000 kosa ireo avy an-tanan-dehibe. Lazain'ny manampahaizana momba ny lalàna fa mampitaratra ny [fiovana tskelikelin'ny] fiaraha-monina an-tanan-dehibe sy ambanivohitra Shinoa io volavola io. Nanomboka tamin'ny taona 1953 taona nandaniana voalohany io lalàna io ny fitongilanana misy ankehitriny. Tamin'izany fotoana izany manko dia maro dia maro noho ny avy any an-tanan-dehibe ny isan'ny mponina any ambanivohitra. Ny nokendrena tamin'izany fotoana izany dia ny tsy hahamaro isa loatra ny solombavam-bahoaka avy any an-tanan-dehibe.
Somary nifararemotra kokoa ny mpiserasera raha nahita ny lohatenin-gazety tantanin'ny fanjakana manao hoe “Zorina mankamin'ny fampitovian-jo politika sy fari-piainana an-tanan-dehibe sy ambanivohitra ny lalàna shinoa” sy ny hoe “Dingana manakaiky kokoa ny fitovian-danja”.
Manontany ny fahazoa-mitoky sy ny famerana ny fandraisana anjaran'ny mponina any Shina amin'ny fifidianana ny mpiserasera avy amin'ny nfdaily.cn:
1 # 网友 2009-10-28 10:18:40: 当某一权利仅仅是纸面权利，而不被坐实时，大家都不重视它就在所难免。而不重视的结果是，让这一权利更加流于形式. 这么多年在外面遇见很多黎民百姓，问过很多人，结果都和我一样从来不曾有用过一次选举权的事。一切还是务实点好。许多空话对百姓又有什么意义。
Raha an-taratasy ihany fa tsy mihatra akory ny fananan-jò, dia tsy raharahian'ny olona. Ny vokany lasa fombafomba fotsiny ilay zo. Maro ny olona nanontaniako nandritra ny taona maro. Maro, ary anisany aho, no tsy afa-nifidy mihitsy hatramin'izay. Teny tsy misy dikany ireny amin'ny sarambambem-bahoaka.
6 # 网友 2009-10-29 23:47:33: 选举制度无论怎样改，内定人选早就安排好了
Na inona na inona fanavaozana eo, efa voalahatra mialoha hatrany ny kandidà tiana apetraka.
Vao haingana izay fa tamin'ny volana septambra, dia nisy lahatsoratra tao amin'ny Southern Metropolitan Weekend momba ny fanavaozana tahaka izao nahazoana fanehoan-kevitra:
Mameng 2009-09-17: 其实现在就算这四分之一的选举权都没有充分的给农民行使啊.很多农民这一辈子都没亲眼见过“人大代表”为何方神圣
Raha ny marina, tsy nanam-pahafahana hampihatra ny “ampahaefatry ny zony” hifidy akory taloha ny tantsaha. Maro no tsy mbola nahita solombavam-bahoaka akory nandritra ny androm-piainany.
Misy ireo manontany ny ilàna voalohany ny fampitovitoviana lanja ny mponina ambanivohitra sy andrenivohitra:
foxhtj 2009-09-18: 如果构成人民的主体是农民，为什么人代会不能成为农民大会，何况是在没有农会的情况下，难道仅仅是因为按马教教义，工人阶级是统治阶级，高人一等？那又何必上山下乡呢
Nahoana kosa moa raha mba ny tantsaha no maro an'isa ao amin'ny Antenimiera raha ny tantsaha no maro an'isan'ny mponina? Satria ve noho ny Marksisma-Leninisma nilaza hoe ny ny sarangan'ny mpiasa no saranga tokony hitondra? Koa raha izany, inona no ilàna ny hetsika “Mankany ambanivohitra”?
Miharihary fa adihevitra maro no milafika ao ambadiky ny fanavaozana. nanome ny fanadihadiany i 孫嘉業 avy ao Mingpao any Hong Kong:
不過，雖然近幾屆全國人大農村代表比例增加，但真正的農民代表人數與毛澤東時代相較卻不增反減。在3000多名代表中，真 正的農民僅百名左右，很多農村人大代表是鄉鎮幹部。即使在毛澤東時代，農村選出的人大代表又能在多大程度上代表農民利益，頗成疑問。在國家工業化的進程 中，農民的利益總是最先被犧牲掉的。
Na dia mitombo isa aza ny solontenan'ny avy any ambanivohitra dia nihena ihany raha oharina ny tamin'ny andron'i Mao. Manodidina ny zato monja miohatra amin'ny solombavam-bahoaka 3 000 no tena tantsaha. Ny ankamaroan'ny solontenan'ny tantsaha dia mpiasam-panjakana ihany. Na dia tamin'ny andron'i Mao aza dia efa nampanontany tena ny fiarovan'ny solontenan'ny tantsaha ny tombotsoany. Ny tantsaha hatrany no sorona voalohany rehefa mizotra ny fanapariahana ny indostria.
真正增加農民在國家政治生活中的話語權，單靠增加農民選出的人大代表的數量是不足夠的。正如現今的工人代表亦未能充分代表 工人利益一樣，要徹底改革人大代表産生方法，就應落實人民的選舉權和被選舉權，擴大選舉競爭性，打破身分職業的界限，做實地域代表制，如此，「幾分之一」 的困擾，亦隨之化為無形。
Tsy ampy ny mampitombo ny isan'ny solontena fidian'ny tantsaha raha tiana ny hampitomboana ny solontenan'ny tantsaha eo amin'ny sehatra nasionaly. Tahaka izany koa, tsy tafitan'ny solontenan'ny mpiasa loatra ny zon'ny mpiasa eto Shina amin'izao fotoana izao. Raha tiana hisy fiovana ifotony ny fandrafetana ny solontena ao amin'ny Antenimieram-pirenena entim- bahoaka dia mila hatsarain'i Shina ny zon'ny olona ho afaka mifidy sy ho afaka fidiana, Ampitomboina ny fifaninanana eo amin'ny fifidianana, ravàna ny famerana mifototra amin'ny fonenana [occupation] sy ny fiaviana [identity], ary omena vahana ny fitsinjarana ara-drariny ny solontena isam-paritra. Raha efa izay, dia mety ho voavaha ny adihevitra momba ny zo hifidy “mitsipotipotika”.
Fahalalahàna miteny 3 andro izay
Fahalalahàna miteny 2 herinandro izay
Voarara ao Hong Kong ny fiareta-torin'ny vono olona tao Tiananmen, fa mbola tsy voakosoka ny fahatsiarovana manerana izao tontolo izao